Na-anwale izi ezi nke data elu Google - Nkata! - Geofumadas
June, 2019 Google Earth / Maps, topografia
Google Earth na-enye ohere ịnweta data nwelite gị na igodo Google Elevation API. Nchịkọta Ndị Na-ahụ Maka Obodo, na-eji ohere a na Satellite ọhụrụ ya mee ihe iji rụọ ọrụ. Ọrụ a na-enye gị ohere ịhọrọ mpaghara na ebe dị anya n'etiti isi ihe nke okporo, ọ na-alaghachi na elu ya na oghere dị elu nke ejikọtara ya na ngwanrọ na-arụ ọrụ n'Ịntanet na ihe oyiyi mbara igwe.
Lance Maidlow nke ChasmTech LLC wuru nke a eji nke a bu na TwinGEO magazine
M na-achọsi ike mgbe niile banyere data ziri ezi nke Google nyere. E nwere ụzọ abụọ nwere ike isi mee ihe m bu n'uche:
Nzube / nkenke mbido maka mmebi ohuru ohuru.
Ịnweta na topography nke basin maka nyochaa floodplains na HEC-RAS 2
Maka nyocha atumatu, ahọrọ m saịtị abụọ:
Ebe 1 bụ ebe dị elu na Dunedin, Florida. Maka nke a, eburu m mbụ na mpempe akwụkwọ 2 nde LiDAR site na website NOAA.
Ebe 2 bụ ebe a na-ere ahịa na Lake County, Florida, ebe anyị nwere data nyocha na nchịkọta 100, nakwa nyochaa nyocha nke ihe nnweta ndị dị ugbu a.
Ọrụ ahụ Satellite n'elu, na-emepụta ebe maka ule abụọ ahụ na-erughị 10 nkeji ọ bụla. Elu nke sitere na data elu nke Google bụ ihe ijuanya n'ụzọ ziri ezi mgbe ị na-atụle LiDAR na nyocha data.
Otú ọ dị, ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na Google nyere isi na ụbọchị nke data gị.
Ihe si na ya pụta yiri nke ahụ, ọ bụ ezie na ihe mbụ LiDAR bụ 8.5 dị ala ụkwụ jiri tụnyere ọkwa nke ọdọ mmiri. A gbakwụnyere mgbanwe a na data LiDAR na Usoro Ndị Site n'Ịntanet tupu emepụta contours, dị ka egosipụtara n'okpuru ebe a nkọwa zuru oke nke data dị n'etiti isi mmalite abụọ ahụ. N'ihe dị elu nke 1 / 2, 1 / 3 na 2 / 3, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị. N'ihe dị elu nke ịdị arọ dị elu karịa 3 ụkwụ karịa nke data LiDAR. A na - ekwu na nke a bụ eziokwu na isi ihe dị na ebe ndị dịpụrụ adịpụ na - atụle ebe osisi kpuchiri. Ejiri data satellite mee ihe na 20 'okporo.
Na-esote, a na-enyocha nchọpụta anya nke data satịlaịtị nke kwadoro nke ọma na ezigbo ọnọdụ nke ala.
N'okwu a, a ghaghị itinye ọnụ na elu nke Google, na ngwà ziri ezi na ọdịdị n'ozuzu nke oghere na njikọ nke ụzọ dị ugbu a na ọnọdụ ọnọdụ nke ụlọ ahụ.
Ngalaba nke mpaghara mpaghara
N'ihe atụ nke nhazi nke azụmahịa, a na-emepụta contours site na igwe 20 na data satịlaịtị, a na-enweta eriri uhie site na data nchịkọta na 100 'okporo.
Otú ọ dị, ihe ọmụma obodo dị mkpa, ebe ọ bụ na data elego enweghị ụbọchị a matapụtara. A kwụsịrị ịda mbà n'obi ma mepụta ndoputa mgbe ha chịkọtara data Google elu. N'otu aka ahụ, e wuru ọdọ mmiri n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke saịtị ahụ, mgbe a chịkọchara data niile.
Isi Iyi nke data elu nke Google, dị iche iche dịka ọnọdụ gị. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịchọta ihe ọmụma banyere data elu nke Google site na isi mmalite, ọ ka bụ ihe omimi.
Ọ bụ ezie na nyocha a abụghị nkà mmụta sayensị, ọ nwere ike igosi na data ntanetịime Google bụ ihe a na-anabata ma nwee ike ịtụle ya maka mmepụta echiche nke obodo ukwu ma ọ bụ iji mee ka e nwee nnukwu mmiri, nke nwere ike iji mee ihe maka idebe mmiri na ngwa dịka HEC RAS 2.
Previous Post«Previous Nzọụkwụ iji soro ekwentị
Next Post Kasị mma nke BIM Summit 2019Next »
Otu nzaghachi "Na-anwale ezi nnweta data nke Google - Ihe ijuanya!"
RAUL ARROYO HERMOSO kwuru, sị:
Ọ dị mgbagwoju anya iji tụnyere ịdị mma / nkenke nke data altimetric nwetara site na isi mmalite dị iche iche.
Nsogbu a dị na usoro ngụkọta oge / usoro nke ejiri DEM ma ọ bụ lidar data nke a na-atụnyere -> usoro ntupu, a tụlere usoro Geoid, isi ihe nchịkwa wdg.
M ga-eme ọmụmụ na Spain iji lelee IGN's Lidar z orthometric, nyocha RTK GPS na-akwado oke nhazi ọkwa na google ụwa -> na blọọgụ m, m ga-agwa ihe na-apụta….http://autodidactaengeomatica.blogspot.com/
Ekele na ekele maka onyinye gị ...